Tevedzera Jesu Pakukunda Miedzo | Upenyu hwaJesu
MATEU 4:1-11 MAKO 1:12, 13 RUKA 4:1-13
SATANI ANOEDZA JESU
Jesu achangobva kubhabhatidzwa naJohani, mudzimu waMwari unomutungamirira kuenda kurenje reJudhiya. Ane zvakawanda zvokufunga nezvazvo. Paakabhabhatidzwa, “matenga akavhurika.” (Mateu 3:16) Saka ava kukwanisa kuyeuka zvinhu zvaakadzidza nezvaaiita ari kudenga. Zvechokwadi ane zvakawanda zvokufungisisa!
Jesu anoita mazuva 40 neusiku 40 ari murenje. Nguva yose iyoyo hapana chaanodya. Ava nenzara kudaro, Satani Dhiyabhorosi anouya kwaari kuzomuedza achiti: “Kana uri mwanakomana waMwari, udza matombo aya kuti ave zvingwa.” (Mateu 4:3) Jesu anoziva kuti hazvina kunaka kuti ashandise simba rake rokuita zvishamiso kuti agutse zvido zvake, saka anoramba.
Dhiyabhorosi haagumiri ipapo. Anoedza zvimwe. Anoudza Jesu kuti azvikande pasi kubva pamusoro perusvingo rwetemberi. Asi Jesu anoramba kuita zvinhu zvakadaro zvokushamisira. Jesu anotaura mashoko omuMagwaro achiratidza Satani kuti hazvina kunaka kuedza Mwari.
Pamuedzo wechitatu, Dhiyabhorosi anoratidza Jesu “umambo hwose hwenyika nokubwinya kwahwo,” ozoti: “Ndichakupa zvinhu zvose izvi kana ukawira pasi wongondinamata kamwe chete.” Jesu anoramba zvekare asingambotendereri achiti: “Ibva, Satani!” (Mateu 4:8-10) Haabvumi kuedzwa kuti aite zvakaipa nokuti anoziva kuti basa dzvene rinofanira kuitirwa Jehovha chete. Anosarudza kuramba akatendeka kuna Mwari.
Pane zvatinogona kudzidza pamiedzo iyi uye zvakaitwa naJesu paakasangana nayo. Miedzo iyi yakaitika zvechokwadi, izvo zvinoratidza kuti Dhiyabhorosi ariko zvechokwadi kwete kungoti ipfungwa dzakaipa dziri muvanhu sezvinotaurwa nevamwe. Munhu chaiye asingaoneki. Nhoroondo iyi inoratidzawo kuti hurumende dzenyika ino dzose ndedzaDhiyabhorosi saka ndiye anodzitungamirira. Waizova muedzo chaiwo here kuna Kristu dai hurumende idzi dzisiri dzaSatani?
Uyezve Dhiyabhorosi akati aida kupa Jesu umambo hwose hwenyika kana akangobvuma kumunamata kamwe chete. Dhiyabhorosi anogona kuzviitawo kwatiri, zvichida achiisa pamberi pedu mikana inonzwisa mwoyo yokuwana pfuma yenyika, simba, kana kuti chinzvimbo. Kana takachenjera tichatevedzera Jesu nokuramba takatendeka kuna Mwari pasinei nokuti tatarisana nemuedzo wakaita sei. Asi yeuka kuti Dhiyabhorosi haana kusiya Jesu zvachose asi kuti “akamusiya kusvikira pane imwe nguva yakakodzera.” (Ruka 4:13) Ndizvo zvaanogona kuitawo kwatiri saka hatifaniri kuvarairwa.
Jesu angave achifungisisa nezvei mumazuva 40 aari murenje?
Dhiyabhorosi anoedza sei Jesu?
Tingadzidzei pamiedzo yakasangana naJesu uye zvaakaita kuti aikunde?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Dzidza Pamakundiro Akaita Jesu Miedzo